ရီသောသူသည်အသက်တို၏…. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ရီသောသူသည်အသက်တို၏….
Posted by shwepyiaye on May 24, 2011 in Copy/Paste | 20 comments
လူသုံးယောက် သဘေ်ာတစင်းစီးပီး ခရီးထွက်တယ်။ သဘေ်ာက လမ်းလယ်မှာပျက်သွားတယ်။ သူတို့သဘေ်ာပျက်သွားတဲ့နားက ကျွန်းက လူသားစားတဲ့ လူရိုင်းတွေ နေတဲ့ကျွန်း……
လူရိုင်းခေါင်းဆောင် – မင်းတို့သုံးကောင်ကို သတ်ပစ်ရလိမ့်မယ်
လူသုံးယောက် – မလုပ်ပါနဲ့…ဘာခိုင်းခိုင်း လုပ်ပေးပါ့မယ်..အသက်တော့ချမ်းသာပေးပါ..
လူရိုင်းခေါင်းဆောင် – ဒါဆို မင်းတို့ကို အချိန်နာရီဝက်ပေးမယ်…နာရီဝက်အတွင်းမှာ အမျိုးတူ အသီး 10 လုံးယူလာခဲု့က။ ဒါဆိုရင် အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးမယ်.အဲဒီတဆင့်အောင်မြင်သွားရင် နောက်တဆင့်ထပ်ခိုင်းမယ် အဲဒါကိုပါ လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင် မင်းတို့မြို့ကို ပြန်တဲ့လမ်း ညွန်ပြလိုက်မယ်……..
ပထမလူ – ပန်းသီ 10 လုံးနဲ့ပြန်လာတယ်။
လူရိုင်းခေါင်းဆောင် – ကဲ မင်းက ပထမအဆင့်တော့ အောင်မြင်ပီ ဒုတိယအဆင့်ကိုခိုင်းမယ်။ မင်းယူလာတဲ့အသီး 10 လုံးကို တလုံးချင်းစီ ဖင်ထဲ ထည့်ပြရမယ်။ ထည့်နေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာ မငိုရ၊ မမဲ့ရ၊ မအော်ရ၊ အမူအရာ မပျက်ရဘူး။ တကယ်လို့ အမူအရာပျက်ခဲ့ရင် မင်းကိုသတ်မယ်။ မပျက်ရင်တော့ မြို့ပြန်လို့ရတဲ့လမ်းကို ညွန်မယ်………
ပထမလူ – ပန်းသီး ငါးလုံးမြောက်မှာ …မျက်နှာမဲ့သွားတယ်..
လူရိုင်းခေါင်းဆောင် – သတ်စေ…………………………….
ဒုတိယလူ – ညောင်သီး 10 လုံးနဲ့ ပြန်လာတယ်.
လူရိုင်းခေါင်းဆောင် – ပထမလူအတိုင်းပဲ လုပ်စေ.
ဒုတိယလူ – သူကတော့ အေးဆေးပေါ့။ ညောင်သီးက သေးတယ်လေ…..ဒါပေမဲ့ 10 လုံးမြောက် ထည့်တော့မယ့်အချိန်မှာ……
ရီစရာတစ်ခု တွေ့ပီး အူလှိူက်သည်းလှိုက် ရီလိုက်မိတယ်.
လူရိုင်းခေါင်းဆောင် – သတ်စေ
ပထမလူနဲ့ ဒုတိယလူ ………….. တမလွန်မှာတွေ့ကြတယ်……..
ပထမလူ ၀ိညာဉ် – ကျုပ်ကတော့ ပန်းသီး 10 လုံးမို့ ထားလိုက်တော့ သေသင့်တယ် ..သေပျော်တယ်.ခင်ဗျားက ဘာေုကာင့် ရီလိုက်ရတာလဲ….ခင်ဗျားက မသေသင့်ဘဲ သေရတာ……..
ဒုတိယလူ ၀ိညာဉ် – ကျုပ်မှာလည်း ကျုပ်အဖြစ်နဲ့ ကျုပ်ရှိတယ်…ကျုပ် ညောင်သီး 10 လုံးမြောက် ထည့်တော့မယ့်အချိန်မှာ…..တတိယလူက ဒူးရင်းသီး 10 လုံးကိုင်ပြီး အူယားဖားယားနဲ့ ပြေးလာတယ်…ကဲ.ကျုပ်မရီမိဘဲ နေမလားဗျာ……………
View all posts by shwepyiaye →
ဒီတစ်ခါဆိုရင် .. ဒီဟာသကိုဖတ်ရတာ .. စုစုပေါင်း website လေးခုရှိပီ ..
ဖတ်ရတဲ့ website တိုင်းမှာ .. အာဖျံကွီး comment ရေးခဲ့တယ် ..
“ဟားဟား .. သိပ်ရီရတယ်” .. လို.ပေါ့ .. အဟီးးး
တကယ်လဲ သိပ်ရီရပါတယ် .. ဟာသအဟောင်းပေမဲ့လို. .. ထပ်တွေ.နေရလဲ .. အာဖျံကွီးဖြင့် ရီနေတုန်းပဲ …
အဲ .. အသက်တော့ မတိုချင်ဘူးနော် .. အဟီးးး
ဘုရား ဘုရား ဒူရင်းသီးတဲ့၊ တတိယလူနု့ရောတမလွန်မှာမတွေ့ဘူးလား။
ဘုရား ဘုရား ဒူးရင်းသီးတဲ့၊ တတိယလူနဲ့ရောတမလွန်မှာမတွေ့ဘူးလား။
ဒါချို ငိုရင် အသက်ရှည်မှာလား အခုတလော အလုပ်မှာ ငိုငိုနေ၇လို့…
ကျေးဇူးပဲ အဟောင်းတော့အဟောင်း ဒါပေမယ့် ကောင်းနေတဲ့ အဟောင်းလေးပေါ့ဗျာ
တတိယလူကို လိုက်ရှာနေကြတယ်ပေ့ါ။ တတိယလူက ဥာဏ်ကြီးရှင်လေ။ သူယူလာတဲ့ ဒူးရင်းသီးကို လူရိုင်းခေါင်းဆောင်ကို အမြည်းကျွေးလိုက်တော့ ကြိုက်သွားပြီး ဝိုင်းစားလိုက်ကြတာ ၁၀လုံးစလုံး ကုန်သွားတယ်။ တတိယလူကိုလည်း သူတို့ကို နတ်သုဒ္ဓါကျွေးတဲ့ နတ်သားဆိုပြီး ကိုးကွယ်ထားလို့ တစ်သက်လုံး ကောင်းစားသွားသတဲ့။ (ကိုယ့်စိတ်ကူးနဲ့ကိုယ်ပေ့ါ ဖြစ်ချင်သလို ဖြစ်လို့ရတယ်လေ။)
ဒါဆိုရင် အဲဒီပုံပြင်လေးမှာ မမ က ဘယ်နေရာ ကပါဝင် အသုံးတော်ခံပါသလဲဗျ
ပုံပြောသူနေရာကလေ မောင်ကင်းရဲ့။ မောင်ကင်းကိုလည်း ကိုယ့်ရွာသားချင်းမို့ နေရာပေးလိုက်မယ် လူရိုင်းခေါင်းဆောင်လို့။
ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်က လူရိုင်းခေါင်းဆောင်ဆိုတော့ နာမည်နဲ့လိုက်လို့ အဆင်ပြေပါပြီ
ပထမလူ ဒုတိယလူ တတိယလူရယ်နောက်ပြီး လူရိုင်းတွေနေရာမှာ ဘယ်သူက ဆက်လက်
သမ္မတက ကက်ဘိနက်အဖွဲ့ကို ရွေးလို့ရတယ်လေ မောင်ကင်းရဲ့။ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်မှတော့ ကြိုက်တဲ့လူ ကြိုက်တဲ့နေရာရွေးတင်လိုက်ရုံပေါ့။
(မကြိုက်တဲ့လူတော့ ပထမလူ၊ ဒုတိယလူတွေနေရာမှာ ထားပေ့ါ။)
ဒီဟာသကတော့ ကြားဖူးတာ ကြာပြီ MaMa ပြောသလိုတော့ comment တွေ မဖတ်ဖူးသေးဘူး… အတွေးကောင်းပါ့ဗျာ။
ရွာရဲ့ သြဇာရှိ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပဲ ပြန်သုံးရမှာဆိုတော့
သူကြီးကို ပထမလူနေရာမှာ တာဝန်ပေးပြီး
ဦးကြောင်ကြီးကို ဒုတိယလူ တာဝန်ပေးမယ်
တတိယလူကတော့ မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု ဆိုရင် ဘယ်လိုလဲဗျ
သဂျီးနဲ့ ကိုကြောင်ကြီးကို —–လို့ အင်ဒါရိုက်စပိနဲ့ ပြောလိုက်သလိုပဲ။ အဲမှားလို့ နတ်ပြည်ရောက်စေချင်တာ ဖြစ်မှာပါ။
‘ သမ္မတက ကက်ဘိနက်အဖွဲ့ကို ရွေးလို့ရတယ်လေ မောင်ကင်းရဲ့။ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်မှတော့ ကြိုက်တဲ့လူ ကြိုက်တဲ့နေရာရွေးတင်လိုက်ရုံပေါ့။
(မကြိုက်တဲ့လူတော့ ပထမလူ၊ ဒုတိယလူတွေနေရာမှာ ထားပေ့ါ။) ‘ လို့ မမ ကပြောတော့
ထုံးစံအတိုင်း သြဇာရှိတဲ့ လူဟောင်းတွေကို ပြန်နေရာ ပေးတာပါ
ကိုအောင်ပုဆီက ဒူးရင်းသီး ခွံ မှန်သွားလို့လားဗျ
ဒီဟာသလေးကို ခဏခဏဖတ်ဖူးတယ် ဖတ်မိတိုင်းလဲ မရီပဲ မနေနိုင်ဘူး ..